TV Lwalugobile "Samsung": izici, indawo, ukubuyekezwa
Asinakusho ukuthi umthengi zanamuhla ngenkuthalo uyabubona zobuchwepheshe "kokuxazulula", ukuphendula impendulo ngesimo ukuthengwa kudivayisi okuhambisanayo. Nakuba eziningi imikhiqizo emisha emakethe ekhaya Imishini kanye electronics bayakwazi uguqule divayisi futhi izinga lempilo ngempela, iningi labo alibona bahluke kusukela nozakwabo zijwayele kanye zendabuko. Kulesi sici, ithelevishini kubhekwa ingxenye kakhulu ezimisiwe. Ukuthuthukiswa Obalulekile zobuchwepheshe sibonakale siyinto evame, futhi abakhiqizi ufuna imiqondo ehlukile futhi amathuluzi avumela amazinga entsha isignali umsebenzi yokusakaza TV. Phakathi ngentuthuko yakamuva lokhu isikali kungenziwa kwenza engonxantathu TV "Samsung", okuyinto namanje kancane eyaziwa kumthengi, kodwa yabakhanga Ochwepheshe. Umenzi-Korean, esikhundleni salokho, ubonisa ukuphikelela ukusetshenziswa amathuluzi ukumaketha. Ngakho, ngo-2015 ngaphansi Samsung brand ithole wonke umugqa lwalugobile SUHD onobuhle nge high isixazululo.
Izici engonxantathu TV
Ukukhuluma ubuchwepheshe wamavukelambuso ngeke engadingekile ukubalula 3D-izikrini, okuyinto eminyakeni embalwa nje edlule, futhi iqhutshelwe phambili nge abakhangisi. Namuhla, isikhalo ngakuthathu "isithombe" nge lesinqumo high ikakhulukazi ongokomfanekiso njengoba izikrini engonxantathu e-TV ziye ukusebenza 4K ubuchwepheshe enikeze isinqumo eliphakeme etholakalayo namuhla - e UltraHD format. Zona efanayo esibukweni lwalugobile "Samsung" TV kunalokho kuba ngilugweda. Lo mklamo ngendlela efanayo nomsebenzi namaphrojektha e amabhayisikobho, okukuvumela ukunweba engela umbono, kanye nekwenta ncono kusebenta isithombe.
Nokho, asikho isidingo sokukhuluma ku TV of nomphumela ofanayo. Akungabazeki ukuthi umumo lwalugobile inikeza izinzuzo ngokuya nokwenza kwendawo kwelivi ngokuya ukwenza ngcono ikhwalithi yokubandula bezibona umbukeli. Kodwa inzuzo main ekuthuthukiseni "isithombe" izici namanje uzenza 4K format, okuyinto isikhathi esiningi futhi umsebenzi engonxantathu TV "Samsung" nge idayagonali ezahlukene. Ngaphezu kwalokho, njengoba nazo zonke imikhiqizo emisha, onobuhle ezifana anikezwa futhi anhlobonhlobo izinketho ezengeziwe. Kodwa izinto zokuqala kuqala.
ezijulile ukucwiliswa umphumela
Nňkho sina ne imisebenzi ifakwa phambi Onjiniyela ngokwezifiso izikrini nasezindaweni zokubukela ibhayisikobho, isiKorea TV futhi ukunikeza umphumela othile ukucwiliswa, okuyinto abakwazi ukuqhosha "flat" imodeli. Nokho, ukujabulela izinzuzo ezikhona zibe yize, isimiso, uyakwazi ukuhlinzeka lwalugobile-TV "Samsung" ngesikhathi ebuka, kudinga izimo ezimbili. Okokuqala, kubalulekile ukusebenzisa isihenqo esikhulu, hhayi ngaphansi kuka-40-intshi, okwesibili, ubuso bayo kumele amboze okungenani u-40% emkhakheni umbono. Ngokwesibonelo, uma usebenzisa model-55 intshi, lesi silinganiso kuyoba 170 cm.
Kodwa kukhona caveat. Lokhu kubalwa esihambelana onobuhle UltraHD isixazululo. Uma izinga TV esetshenziswa HD noma FullHD, ukwanda Ibanga 323 218 cm ngokulandelana. Ngakho-ke, kungcono ukugxila imodeli 4K, noma yingasiphi ngokwezifiso design nje okwamanje. Ngeshwa, agobile TV "Samsung" ngesikhathi ngaphambi ukuthuthukiswa ephezulu definition ubuchwepheshe okwamanje. UltraHD isiqophi format nge 3840x2160 namanje hhayi okungaka, futhi sizizwa sikulungele ngokugcwele isithunzi sabo akunakwenzeka njalo.
Ukugqama nama-engeli wokubuka
Esinye isici esibalulekile izikrini ngilugweda ukhamisile engela wokubuka nekuphikisana. Kufanele ukuthi izimbangi kukhona "Samsung" ka-LG ukwenza iningi lezi zinzuzo ngokusebenzisa ubuchwepheshe OLED, okuyinto ikuvumela ukudala i-engeli wokubuka ephelele. Futhi, lwalugobile "Samsung" LCD TV ayanikezelwa matrices, balwisana ekulahlekelweni Ngokuphambene lateral. I-engeli lonke ukubonakala inikeza ukungakhululeki efanayo onobuhle ezivamile izikrini flat. Iqiniso lokuthi umuntu oyedwa inqubo wokubuka ungakwazi kuphela uzizwe izinzuzo engeli anda. Nokho, uma phambi isikrini sonke umndeni, izethameli uyozizwa ukungapheleli okukhulu supply isithombe ezisemagumbini.
Ukucabanga futhi ukuhlanekezela optical
Custom ebusweni isikrini ugobile ekushintsheni engela ibonisa imisebe yokukhanya, okuholela ukuncipha ukukhanya. Ngenxa yalokho, i-concavity yakha iphuzu focus at ibanga isigamu engaba ugobile maphakathi kwesikrini. Ukucabanga uzobe kwaluqeda uma umbukeli ihlala okudlula lokhu ayiphoyinti. Ngaphezu kwalokho, i-TV "Samsung" nge screen lwalugobile uyakwazi ukunciphisa ukuhlanekezela optical. Kodwa kule ndaba, le imibono lochwepheshe akuzona acacile ngakho. ukunciphisa ukuhlanekezela sithi iqiniso ukuthi iso womuntu awuwona ngempela surface flat, kanye nokuxhumana isikrini efanayo enikeziwe bezibona obunobunye. Nokho, abagxeki lo mbono nokho aveze ukuthi lokhu kungawavezi umbono wokuba ngumqondisi. Iqiniso liwukuthi uma ngokudubula ngekhamera isebenzisa inzwa-matrix nge shape flat, kanye TV ukucutshungulwa kanye nokuhlinzekwa "izithombe" kwenza izinguquko ezengeziwe.
Kuqhathaniswa izikrini flat, analogs engonxantathu ukunikeza endaweni ebanzi wokubuka - futhi kwaba yisona diagonals efanayo. Nokho, lokhu inzuzo ngeke kuphela uma uqondanise kahle ibanga lapho umbukeli itholakala. Isibonelo, uma uthatha TV "Samsung"-55 intshi kwesikrini lwalugobile okungukuthi elilungile maqondana ububanzi lelivakalako, ke ukwanda ezibukwayo kuyoba 3 per cent ukwanda endaweni. Ngezinye ibanga ngamamitha amathathu kokwanda ubuciko 9%, njengoba engela ke sizonwetshelwa cishe 25 degrees. Kodwa izibalo ezinjengalezi abavumelekile kuphela ngombandela wokuthi esinye isibukeli iwashi TV. Ngokuvamile, kweNdikimba ezibukwayo sisebenza kuphela ngaphansi kwezimo ezifanele ilungiselelo Human igxile esibukweni.
Isizukulwane esisha TV Samsung akuyona nje esibukweni lwalugobile, kodwa azowalekelela yabo ofakwe "smart", okuthiwa i-Smart-Hub. Kule ngxenye sezingcweti Korean baye bagxila zonke zokusebenza ze-TV eziphambili nokusebenza "chips '. Isakhiwo saleli esibonakalayo kuhlanganisa izigaba eziningana, equkethe imidlalo, izicelo Samsung sika nokuphathelene, multimedia amathuluzi, nokunye. D. Kuyaphawuleka khona isiphequluli ukusebenza ukuthi futhi isekela TV "Samsung" nge screen lwalugobile uma ufaka imodi ezifanele. Idivayisi kwenza kube nokwenzeka hhayi kuphela ukuba usebenzise okuqukethwe ngokusebenzisa inethiwekhi, kodwa futhi ukulanda ama-movie ne-TV sikhombisa a hard drive noma i-USB drive, bese ngokusebenzisa ukuba ubuyekeze izinto kungakhathaliseki zokuxhumana ku-inthanethi. Kuhle kokusho netimphawu othomathikhi ikhwalithi yesithombe ukulungiswa. Omabonakude ukuhlinzeka elikhulu umbala imifanekiso, ukusakaza imibala yemvelo, halftones kanye ukuhwebelana iphimbo. Njengoba kahle kungekho izikhalazo ezimayelana nokucija nekuphikisana. Kuncike TV okunjalo futhi Auto Ukugqama umsebenzi wokuhambela amagatsha, okwakuhlanganisa ikuvumela ukuba ushintshe ukukhanya kwezinye izindawo kwesikrini.
Incazelo UE65HU9000T imodeli
Kuyinto imodeli iwuhlelo emgqeni yokuhlela ye umenzi isiKorea, okungase kubhekwe umholi hhayi kuphela ekilasini yayo, kodwa omunye ngentuthuko kakhulu kwezobuchwepheshe kulo lonke ingxenye. Lokhu kuqinisekiswa ezibekiweko imodeli:
Ovundlile isikrini ngilugweda - 65 amasentimitha.
-matrix uhlobo enamathela - isicwebezelisi.
Aspect ratio - 16: 9.
Matrix uhlobo - S-PVA.
Ukulungiswa - 4K ejwayelekile.
I engaba ugobile - 420 cm.
Usekela 3D - likhona.
Kanye usekelo UltraHD futhi ehloniphekile 65-intshi idayagonali, imakwe umsebenzi Sula Ukunyakaza Ukukala, nakho got a TV "Samsung". imodeli sesikrini Lwalugobile ngokusebenzisa le isichibiyelo inikeza olusha nge ukhululekile ngoba amehlo imvamisa. Kusukela lihambisana ubuchwepheshe ngakuthathu kuvimbela sibalo, abadali abathintekayo TV kwasemuva, futhi lokho kwenza ukushuba kulokolokoza.
Incazelo UE55HU9000 imodeli
Le modeli akunakubangelwa isilinganiso isigaba. It ngokufanele ihlanganisa lesinqumo high nokusebenza xaxa. Onjiniyela baye basebenzisa okucaciswe luketshezi nge diagonal 55 amasentimitha futhi-aspect ratio 16: 9. Mangisho ukuthi le nguqulo akazange alahlekelwe ube usayizi omkhudlwana ngokuya izinzuzo projector screen ngilugweda. Nokho, agobile TV "Samsung" 40 amayintshi unamandla adlulisa imiphumela efanayo ukujula nekuphikisana yesithombe, kodwa zonke esibukweni okufanayo ekuphunguleni usayizi akuyona umxhwele kangaka, "isithombe". Kodwa imodeli ungajabulisa ukusebenza, okuyinto izesekeli ngesimo 3D-izibuko, touch control panel, yewebhu eyakhelwe, ekosensora, agxumele-timer nokunye. D.
Incazelo UE40JU6610U imodeli
Kuyinto lomncane kanye omunye onobuhle ngilugweda-screen lokuqala. Libuye ezingabizi kakhulu. Ngokuphathelene isinqumo, bese-ke umelwe ngefomethi efanayo UltraHD, okuyinto izikhathi 4 isici FullHD. Ngalobu buchwepheshe, TV "Samsung" nge screen lwalugobile 40 amayintshi uyakwazi esinika nemininingwane eyengeziwe esihle. Kukhona isici kule nguqulo kuthiwa wenziwa zemvelo umbala imifanekiso, okuyinto eziqhutshwa yilo Mnyango usebenzisa PurColour ubuchwepheshe. Isibukeli uthola Iphalethi ububanzi imibala egqamile kanye okumsulwa njengoba cimeza njengoba enzeka ngokoqobo. kakade Sishilo "smart" ukugcwaliswa we izindlela zakamuva of the brand-Korean. Ummeleli we ezinhlwini ephansi, futhi, kwaba okufanayo futhi ngakhula kahle-Smart-imenyu, lapho, phakathi kwezinye izinto, inikeza futhi ukufinyelela internet.
okubuyayo mayelana onobuhle lwalugobile
accolades Iningi kufanele ziqondiswe onobuhle 4K-isixazululo, izinzuzo okuyinto zisobala. Ngamanye imigomo isimo akusona kuqondile ngakho. Abanikazi bathi wezindlu "isithombe" ngaphandle ukuhlanekezela futhi ukucabanga, ukwandisa ububanzi ezibukwayo futhi baqhathanisa izinzuzo. Futhi, kukhona ezinye izibuyekezo engonxantathu TV "Samsung", ezisetshenziswa for yokubuka izithombe ezintathu-ntathu. Njengoba kunjalo ngefomethi ye-4K, ubuchwepheshe 3D is ngokufanele ukusebenza kule ukusakaza ngokusebenzisa esibukweni ngilugweda. Enye into ukuthi ukufeza umphumela engcono ngangokunokwenzeka kuphela umbono olulodwa futhi linga ngamasu ahlukahlukene ngenhloso indawo isihlobo isikhundla esikrinini.
Ngaphambi kokuthuthela Izibuyekezo ezingezinhle, mangisho ukuthi onobuhle ezifana lutho ukulahlekelwa amadivayisi bendabuko. I lokususa kuphela - yinani. Ngokuqondene Izibuyekezo ezingezinhle kuba maqondana esibukweni uqobo, bethi Ukuwohloka engela wokubuka ezibukelini musa ukuhlala phakathi. Futhi iso abanolwazi uzophawula nengasontekile optical, okuyinto uhlushwa TV "Samsung" nge screen lwalugobile. Impendulo ikhwalithi yesithombe in lonke nemingcele e okuthambile jikelele, kodwa futhi, eziningi kuncike ukusebenza pre-izilungiselelo bese ukhetha into ukubuka.
Umbuzo oyinhloko ukuthi umi namuhla phambi abakhiqizi ithelevishini: indlela ethembisa ngilugweda izikrini kanjani kangcono zisebenzisa UltraHD format? Uma maqondana isimo yesibili kucacile, izinzuzo sesikrini angajwayelekile ayibonakali kalula kwaye. Mhlawumbe lokhu kuchaza imizamo abakhangisi ezikhangisa nakanjani TV lwalugobile "Samsung". Izibuyekezo of the abathengi ngokwabo ngesikhathi kungekho ngempumelelo babonakala. Uma ukuba ukuhlolwa ukwakhiwa entsha nazo zonke izibalo ngokomzimba futhi yejeyomethri indlela esiqinile, inzuzo is Yiqiniso, kuyoba. Lokhu kwanda ye-engeli wokubuka nokwanda ngokungafani isilinganiso, kanye more ngokujulile okuqonda sibonwa we "izithombe". Enye into ukuthi ukuqaphela ngokugcwele lezi zinzuzo kungenziwa kuphela ifakwe usekelo 4K format futhi ehloniphekile idayagonali. Futhi kulezi zici kungithinte ukubaluleka onobuhle ezifana, okuyinto ezomhlaba ayizinkulungwane 50-70. Hlikihla.
Seziqa Hotpoint-Ariston hf 4180 W: umbiko izici isici imodeli
Kettles Electric: izibuyekezo, izilinganiso. Yikuphi ukukhetha kagesi
VGA-SCART-adaptha. SCART-VGA-adaptha: Ukucaciswa, ukubuyekezwa, intengo
Hob. bobumba Glass
Thales: elihlanganisa isayensi eMpumalanga naseNtshonalanga
Isidleke nonogolantethe sika. Kuphi futhi kanjani storks akha izidleke zawo?
Liyini iZwe Lesithembiso?
Anatomy komzila wokuzungeza: ukwakheka kwazo, imisebenzi
Umsizi Irreplaceable umndeni ngamunye - Leifheit isesulo
Indlela yokuxolisa intombi yakho
I Abadali hydrogen. Ukuhlolwa kwe-hydrogen e-USSR, US, North Korea
Nokia E5: Ukucaciswa, imiyalelo, izithombe, Tuning
Esivimba amanzi sokuwohloka